Hub iyo Hanti lagala baxay Bakhaaro ay gacanta ku hayeen Maleeshiyaadka Danab ee Mareykanku tababaray.
Thursday November 28, 2019 - 15:03:09 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Khilaaf xooggan ayaa ka dhax dilaacay saraakiisha ugu sarraysa maleeshiyaadka dowladda Federaalka Soomaaliya kaas oo salka ku haya lunsasho hantiyadeed.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in saraakiisha hoggaaminaysa Maleeshiyaadka Bangaraafta ee ciidamada Mareykanku ay ku tababareen saldhigga Balidoogle ay lunsadeen lacago mushaar ah iyo sahay ciidan ah.
Isbuucii lasoo dhaafay ayaa bakhaaro kuyaal gudaha garoonka Balidoogle iyo deegaanno katirsan Sh/Hoose laga waayay qalab melleteri iyo agabyo kale oo dowladda Mareykanka ay ugu deeqday taliska ciidamada dowladda.
Taliyaha Maleeshiyaadka Danab iyo kaaliyaashiisa ayaa latuhunsanyahay in ay lunsadeen hanti lagu qiyaasay boqolaal kun oo dollar, saraakiil katirsan DF-ka ayaa warbaahinta ka xaqiijiyay in musuq maasuq uu ka dhacay saldhigga Balidoogle.
Mas'uuliyiin katirsan taliska ciidamada Melleteriga ayaa ku hanjabay in ay tallaab ka qaadi doonaan saraakiisha falalka musuq maasuqa ah kula kacay hantida ciidamada.
Waxaa latuhunsanyahay in saraakiisha Maleeshiyaadka Bangaraafta ay leexsadeen hanti ay dowladda Mareykanka ugu talagashay ciidamadii lagu tababaray garoonka Balidoogle, warar laysla dhax marayo ayaa sheegaya in hantida lawaaye qaarkeed lagu arkay iyadoo suuqyaa Muqdisho lagu kala iibsanayo.
Sanaddii 2018 ayay wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka si KMG ah u hakisay taakuleyn ubadan raashin iyo shidaal ay siin jirtay ciidamada dowladda Federaalka kadib markii la musuq maasuqay taakulayntaas oo dhaxda ay ku leexsadeen mas'uuliyiintii ugu sarraysa taliska ciidamada dowladad Farmaajo.